प्रश्नचिन्ह - | Kavyalaya - काव्यालय
by shankarlamichhane मंसिर ७, २०७६
कहानी पठाउनु भनी तपाईंको आदेश पाएँ । तर, आज केही दिनदेखि मनस्थिति बिग्रिरहेको छ । यसको कारण हो, मेरो एक मित्रको चिठी जो मैले अस्ति पाएँ । हामी सँगै पढ्यौँ, सँगै खेल्यौँ । तर राजु हामीभन्दा पहिले पनि भिन्न देखिन्थ्यो । उसको पिताजी दरबारी थिए । तेस्रो बाजी बिहा गरेर जन्मेको राजुले आफ्नो बाल्यावस्था पिताजीको काखमा बिताउन पाएन । आमा उसलाई जन्म दिएको केही समयमा नै परलोक भइन् । र ऊ पालियो पिताको एक साथीकहाँ । परदेशमा । काकाले उसलाई मित्रको हैसियतबाट पाले । र राज जहिले पनि थियो । उसले चाहेको पुग्न गाह्रो थिएन – धनको विषयमा । तर प्यार उसले पाएन ।
र आज उसको यस्तो पत्र पाउँदा मलाई दुःख लागेको छ । र म त्यसको जवाफ पाउन सक्दिनँ । यो पत्र छापिदिनोस् । सायद कोही पाठकले तकलीफ उठाएर जवाफ दिहाल्नेछन् ।
आज बिहानैदेखि मनमा आफूलाई पढ्ने भावना उम्रिरहेको छ । यो अज्ञानतालाई चिरेर- म देख्‍न सकूँ केही, यो इच्छा छ । र बिहानैदेखि जीवन-फिल्मको चक्कलाई उल्टो घुमाएर म झन्‌झन् पुराना सीनहरू हेर्दै जान्छु । र एक प्रश्‍न बारबार मेरो मनमा घुमिरहेछ, म त्यसलाई समाधान गर्ने कोशिसमा थिएँ । म किन यस्तो दुःखी छु – व्यतीत जीवनका हर अङ्गमा यो प्रश्नचिन्ह ट्रेडमार्कझैँ लागेको छ ! वर्तमान जीवनको हरेक कुनामा यो प्रश्‍नचिन्ह झन् गहिरोसँग छापिएको छ ! मलाई आफ्नो जीवन अहिले एउटा पुरानो नोट जस्तो लागिरहेछ । मैलो, ठाउँठाउँमा च्यातिएको, असङ्ख्य हातमा परेर एउटा गरिबको हातमा पर्न आएको । ऊ त्यसलाई ओल्टाई-पल्टाई हेरिरहेछ । त्यसमा छापिएको रुपियाँको अङ्क अस्पष्ट छ, त्यसको पानीछाप धमिलिएको छ तापनि व्याप्त छ, त्यो पानी छाप नोटको जीवनी हो, एक इतिहास ! मेरो जस्तै । र त्यो गरिब सोचिरहेछ – यो नोट चल्छ ? मेरो प्रश्‍न जस्तै ।
र सबैभन्दा मुख्य छ- यसको रुपैयाँ भुक्तान माग्न आएमा सदर मुल्की खानाबाट मोरु… तुरुन्त पाइनेछ । नोट जन्मेको अड्डामा पुग्न गाह्रो छ, धेरै दुःखदायी, तर सबै जान्दछन् नोट कहाँबाट आयो । …..
“तब, सिर्फ एउटै कारण हुन सक्छ- स्नेहको अभाव ! यसले केटाकेटी बेलामा प्यार पाउन सकेन, र माया पनि त्यसबेला जब धेरै ढिला भैसकेको थियो ।’
मेरो जीवनको ट्रेजेडी आमाको छिटो मरण । र बाबुको साथी काकाको शुष्क हृदय । म काकालाई दोष दिन्नँ । किनकि मैले उनीसँग स्नेह पाइनँ यो भन्दिनँ । यो अन्तिम २ वर्ष उनले आफ्नो हृदय मेरो अगाडि राखेका छन् । तर….. गोपालको अवस्था…. त्यस बखत राजु ढुङ्गा बनिसकेको थियो । पानीले माथिल्लो सतह भिजाएर बगेर गयो भित्र पुग्न सकेन । काकाले मलाई एक मित्रको हैसियतबाट प्यार दिनुभो न कि छोराको । हामी राजनीति, साहित्य, इतिहास, प्रेम र वासनामाथि गफ गर्थ्यौँ । मेरो जीतमा बधाई र मेरो हारमा अफशोच दिनुभो- एक मित्रले झैँ। तँलाई थाहै छ, मैले एक दिन वहाँलाई भनेँ- “म फलानी लड्कीसँग विवाह गर्न चाहन्छु ।” वहाँले भन्नुभो- “हुन्छ, तर मैले अठोट गरेँ कि ऊ सच्चा प्रेम गर्छे कि गर्दिन !” र उमाबाट निराश भएर एक दिन इतिहास बताउँदै मैले भनेथेँ- “म बिहा गर्दै गर्दिनँ, स्वास्नीमानिस धोकालु छन् ।” काकाले भन्नुभयो- “वासनाको भोकमा अन्धा भएर नहुत्तिनु । बिहे गर्नु-नगर्नु तेरो हातमा छ, तर राजु, बिहे गर्ने अगाडि सिर्फ २ कुरा विचार गरेस् । एक त एउटैसँग जीवन बिताउने प्रण र अर्को उसले तँलाई प्रेम गरेको होस् ।”
यत्तिको स्वतन्त्रता पाएर पनि, सबैभन्दा धोका पाएको छु, स्वास्नी मानिसबाट । मेरा प्रेमहरुको श्री गणेश राम्रो छ तर कठिन वाचा अत्यन्त नराम्रो । शायद यो मेरो असमर्थताकै दोष होला ! बिजुली बत्ती बलेको सडकमा हिँडेको बेला के तैँले एउटा कुराको विचार गरेको छस् – बत्तीको खम्बा अगाडि हुन्जेल क्या राम्रो लाइट छरेर सडकै उज्यालो पारेको हुन्छ । तर त्यही खम्बा नाघ्नेबित्तिकै छाया अगाडि सरेर बाटोलाई झन् अन्धकार पारिदिन्छ । मेरो जीवन पनि यस्तै एउटा बटुवाको सफर हो । तर…. शायद म रुकेको भए उनीहरूको ज्योति पाउन सक्थेँ होला । र रुक्नु त जीवन होइन, अब त्यो पनि अस्वाभाविक हुन जान्थ्यो ।
Image Source: Question Mark from WIX